Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Ụbọchị Njem Nleta Ụwa na Google
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akwụkwọ akụkọ Italy • nzukọ • News • Iwughachi • Resorts • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Google na -edekọ ọnọdụ dị na ebe ndị njem nlegharị anya achọgharịrị na maapụ Google na Italy na Europe. Na emume ncheta njem nlegharị anya nke ụwa, nke a na -eme taa, Septemba 27, 2021, igwe nyocha ahụ achịkọtala ọkwa ebe ndị Itali na Europe wee megharịa ngwa na atụmatụ atọrọ iji kwado ụlọ ọrụ njem.
Ndepụta malitere kemgbe mmalite afọ na ebe ndị njem ama ama na Italy na Google Maps.
Ndị kacha ewu ewu bụ: Colosseum, Amalfi Coast, Katidral Milan, Gardaland, Trevi Fountain, Tower nke Pisa, Pantheon, Piazza Navona, Piazza del Popolo, na Villa Borghese.
Banyere Europe niile, ebe iri a na -achọkarị gụnyere 3 na Italy.
Ndị kacha mee iri na Europe bụ: Tour Eiffel (France), Basílica de la Sagrada Família (Spain), Musée du Louvre (France), Europa-Park (Germany), Colosseum (Italy), Plitvička jezera (Croatia), Amalfi Coast (Italy), Energylandia (Poland), Katidral Milan Duomo (Italy), Camp Nou (Spain).
N'ime afọ gara aga, Google esoro ụlọ ọrụ njem na-arụkọ ọrụ site na ịnye nghọta, akụrụngwa na-akwụghị ụgwọ, na ọzụzụ iji mejupụta nkà dijitalụ iji kwado azụmaahịa na akụrụngwa njem iji kwadebe na imeghari ka ọ dị na mbụ.
Daysbọchị ndị a, igwe nchọta ewepụtala ngwa ọrụ na atụmatụ ọhụrụ iji nyere aka na azụmaahịa njem na -egbochi ma jikọọ na ndị mmadụ n'ịntanetị.
Ndị a gụnyere atụmatụ ọhụrụ nke Google Search iji nyere ndị mmadụ aka ịchọpụta ebe nkiri, njegharị, ma ọ bụ ihe omume ndị ọzọ. Mgbe ndị mmadụ na -achọ ihe nkiri, dị ka Eiffel Tower, modulu ọhụrụ ga -egosi njikọ maka tiketi nnabata akwụkwọ na nhọrọ ndị ọzọ enwere. Ọrụ a dị n'ụwa niile n'asụsụ Bekee, ndị mmekọ nwere ike ịkwalite ntinye akwụkwọ tiketi na -akwụghị ụgwọ, yiri njikọ ntinye akwụkwọ nkwari akụ n'efu ewepụtara na mbido afọ a.
Ngwá ọrụ ọzọ bụ nke metụtara ihe ọmụma nke ntinye ụlọ oriri na ọ inụ inụ n'ihe metụtara nkwado ozugbo na google.com/travel. N'ezie, usoro ọchụchọ na -egosi nyocha na -abawanye maka nhọrọ njem na -adigide, dị ka ọchụchọ maka "eco hotel," nke na -eto na -aga n'ihu kemgbe 2004.
Site n'ọnwa a, a na-esonye na nkọwa nkọwa yana ndepụta atụmatụ nke ụlọ oriri na nkwari akụ ahụ na-akwado nkwado na akara "gburugburu ebe obibi" n'akụkụ aha ụlọ ahụ.
N'ikpeazụ, Google na -esonye njikọta Travalyst dị ka onye guzobere ya iji nyere aka wulite usoro zuru ụwa ọnụ na nke mepere emepe maka ịgbakọ na iji anya nke uche hụ ikuku ikuku ikuku na iji hụ na enyere aka n'ịzụlite ụkpụrụ ndị yiri ya maka ụlọ oriri na nkwari akụ. Nzukọ a-nke Prince Harry, Duke nke Sussex na-edu, ma hiwe ya na mmekorita ya na Booking.com, Skyscanner, Trip.com, na Visa-abụghị uru na arụ ọrụ iji nyere aka mee mgbanwe ka njem na-adigide wee bụrụ ihe a na-ahụkarị. naanị niche.